Archive du 20200108
Volan’ny mpiasam-panjakana nakepoka Tompon’andraikitra marobe higadra
Mitohy ny gidragidra nateraky ny raharaha vola 65 000Ar solona « panier garni »
Fitsinjaram-pahefana tena izy Lasan-ko vavany fotsiny
Fanaon’ny mpanao politika fotsiny no midradradradra ny fitsinjaram-pahefana tena izy.
Fifidianana teto Antananarivo Renivohitra Hotsaraina anio ny raharahan’ady
Herintaona katroka anio alarobia 8 janoary no nanambaran’ny HCC na ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny valim-pifidianana ofisialin’ny fifidianana filoha fihodinana faharoa fa lany ho filoham-pirenen’ny Repoblikan’i Madagasikara
Hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hala-bato Mampiomana ny vahoakan’Antananarivo
Eo am-piandrasana ny voka-pifidianana avoakan’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana isika izao, hoy ny mpitari-tolonaeo anivon’ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny
Fampandrosoana an’i Madagasikara Tena mbola ilana famatsiam-bola avy any ivelany
Mbola marefo i Madagasikara amin’ny lafiny ara-toekarena ary tena mbola miankin-doha amin’ny fanampiana avy any ivelany.
Fiaran’ny Prezidansa Efa lasa fitateran’entan’olon-tsotra ihany koa ?
Ny alatsinainy 6 janoary tolakandro teo teny Andrainarivo, amin’ilay lalana mandalo ny Hôtel Panorama hivoaka any amin’ny Cité Planton iny no nahitana ny toe-javatra hafahafa.
Haino aman-jerim-panjakana Miasa anaty horohoro ny mpiasa
Efa hatramin’ny fiafaran’iny taona 2019 iny no nahenoana fitokonana samihafa nataon’ny avy eo anivon’ny ORTM na ny fiadidiana ny haino aman-jerim-panjakana tamina faritra sasantsasany teto
Tafakatra any amin’ny dingana famaranana i Madagasikara amin’ny taranja tsipy kanetibe “trophée l’equipe”,
Baolina kitra Telma Coupe de Madagascar 2020 Niakatra ho 1.000.000 Ar ny sandan’ny fisoratana anarana
Efa nisokatra tamin’ny 20 desambra teo ny fisoratana anarana ho an'ireo klioba vonona handray anjara amin'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara eo amin'ny baolina kitra na ny « TELMA COUPE de Madagascar ».
Rugby à XV “GOLD TOP20-2019” Hotanterahina ny 19 janoary ny lalao manasa-dalana
Tapaka tamin’ny fivoriana nataon’ny Malagasy Rugby tamin’ny alatsinainy 06 janoary 2020 teo fa amin’ny alahady 19 janoary 2020 izao
Edito Kihon-dalana voalohany
Anio, raha tsy misy ny fiovana, dia hitodika eny anivon’ireo tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana indray aloha ny mason’ny mpanara-baovao rehetra. Inona daholo no ho didim-pitsarana hivoaka ao ?
Oniversiten’Antananarivo Tsy mbola vita ny taom-pianarana 2018 - 2019
Nivalona iny ny taona 2019. Antenaina fa taona vaovao hitondra ainga vaovao ho an’ny tontolon’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ity taona 2020 ity,
Vaky trano any Belo Tsiribihina Vehivavy bevohoka no tena tompon’ny ketrika
Tsy ny lehilahy irery intsony amin’izao no tena manan-talenta amin’ny famakiana-trano sy ny asa fanendahana fa efa tena manao ihany koa ny vehivavy.
« Ballon d’or Africain 2019 » Nobatain’i Sadio Mane
Voahosotra ho mpilalao baolina kitra mendrika indrindra aty Afrika ho an’ny taona 2019 ilay teratany Sénégalais Sadio Mane, araka ny valin’ny « CAF Awards 2019 »
Fahamaizan’i Aostralia Tonga any Chili sy Argentina ny setroka
Efa ho andro maromaro no voa mafy amin’ny fahamaizana any Aostralia satria mihena indray ny ala tokony hisintona ny etona mangeja hafanana na « gaz à effet de serre ».
Raharaha Carlos Ghosn Namoahana didy fampisamborana ihany koa ny vadiny
Tsy manaiky ny fitsarana japoney fa dia namoahana didy fampisamborana ihany koa ny vadin`i Carlos Ghosn, mpandraharaha
Famokarana fanampin-tsakafo Hisy orinasa hatsangana any Atsimo
Nisy omaly talata 7 janoary ny dinika arak’asa niarahan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin’ny delegasionina avy amin’ny Fondation Mérieux,
Raim-pianakaviana maty teny Bevalala Zandary no ahiana ho namono azy
Resaka vola 2.000 Ar tsy ampy, tokony ho naloan’i José, raim-pianakaviana tamina mpivarotena iray nalainy no nidarohan’ny
Ampitatafika Saika nidiran-doza ilay taksi
Fikoropahana tsy nisy ohatra’izany ny teny Ampitatafika nanakaiky ny banky BNI omaly.
Paosin-dra Misy mivarotra 90.000 Ar eny amin’ny sisiny
Mbola vao 20 % monja ireo mpanome ra an-tsitrapo eto amintsika ankehitriny raha 100 % no tanjona napetraky ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana.
Ora-mikija sy rivo-mahery Potika Andapa, olona iray no namoy ny ainy
Taorian’ny distrikan’i Soalala dia nataon’ny ora-mikija nahita faisana ihany koa ny distrikan’Andapa any amin’ny Faritra avaratry ny Nosy.
Diaspora Kaomorianina Mampiditra 2 miliara dolara isan-taona
Maherin’ny 150 000 ireo teratany Malagasy monina sy mila ravinahitra any Frantsa.
Fifandonana tany Soavinandriana Itasy Nitifitra ny zandary, olona 3 maty
Gidragidra ny tao amin’ny Kaominina Ambanivohitr’i Dondona any Soavinandriana Itasy omaly.
Kamiao nitrifana teny Maibahoaka Maty tsy tra-drano ilay vehivavy, lehilahy iray tapa-tongotra
Maty tsy tra-drano ilay vehivavy, tapaka kosa ny ranjon’ny lehilahy iray nitsahin’ny kamiô teny Maibahoaka Ivato,
Anosibe Tsena Vola 500 Ar niteraka sakoroka tao anaty taksibe
Raikitra ny sakoroka tao anaty taksibe iray hihazo an'Ampitatafika, omaly tokony ho tamin'ny fito ora hariva.
Polisim-pirenena Manaraka fanofanana manokana ireo hanao « PR »
Miatrika fiofanana amin’izao fotoana izao ireo « Police de la Route » mialoha ny hiverenan‘izy ireo amin’ny andraikiny eny an-dalambe.